Brucite bụ ụdị ịnweta magnesium hydroxide - vidiyo
Buyzụta brucite eke na ụlọ ahịa anyị
Brucite bụ ụdị mineral nke magnesium hydroxide, yana usoro kemịkal Mg (OH) 2. Ọ bụ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe nke periclase na mabble, mmanụ dị ala na-agbanwe ala nke hydrothermal vein na metamorphosed limestones na chlorite schists, wee hie n'oge agwọini dunites. A na-ahụkarị Brucite na mkpakọrịta nkeine, calcite, aragonite, dolomite, magnesite, hydromagnesite, artinite, talc na chrysotile.
Ọ na - agbakwụnye ihe owuwu dịka CdI2 nke nwere hydrogen-bonds n’etiti akwa ahụ.
Emechara kọwaa Brucite na 1824 wee kpọọ onye nchọpụta, American mineralogist, Archibald Bruce (1777-1818). A na-akpọ ụdị ihe dị iche iche mara mma nke nemalite. Ọ na - apụta na eriri ma ọ bụ laths, nke a na - enwekarị oge, mana mgbe ụfọdụ ụzọ nduzi.
Ebe a ma ama na US bụ Wood's Chrome Mine, Cedar Hill Quarry, Lancaster County, Pennsylvania. Achọpụtara odo, acha ọcha na acha anụnụ anụnụ na Brucite nke nwere ụdị botryoidal na Qila Saifullah District nke Baluchistan, Pakistan. Na mgbe nchọpụta mechara mechara Brucite mere na Bela Ophiolite nke Wadh, Khuzdar District, Province Baluchistan, Pakistan. Nkume a sitere na South Africa, Italy, Russia, Canada, na mpaghara ndi ozo mana ihe nchoputa di uku bu ihe nlere US, Russian na Pakistan.
Nkọbara nke Brucite, ike, uru, ọgwụgwọ na atụmatụ ihe atụ
Brucite ga - enyere gị aka n'ọtụtụ ụzọ gụnyere:
A mara ya inwe akụrụngwa na-agwọ ọrịa dị mma gụnyere inye aka ịchịkwa ahụ ọkụ.
A na-ekwupụta ihe ndị a ịnweta nwere ume nke nwere ike inyere anụ ahụ aka ịnagide oke alkalinity.
O nwere ike inyere nsogbu eriri afọ aka ma nyere aka belata akwara akwara.
A makwaara ya na inye aka nchikota na inye aka na nsogbu di na akwara ike site na ime ka o nwekwuo mmezu na idi ire.
A na-ekwukwa na Brucite na-akwado ọgwụgwọ nke ọkpụkpụ gbajiri agbaji ma mara na ọ na-ebelata neuralgia na mgbu nkwonkwo.
Site na omume ya iji mepee chakra okpueze, a na-ekwu na ibelata ihe mgbu nke isi ọwụwa na migraine. Jiri okpueze chakra bulite mmụọ gị, mee ka echiche gị dị mma ma kwalite ọnọdụ gị.
Brucite nwere ụda ọma nwere ike inyere gị aka kpughee ma ọ bụrụ na ọnọdụ gị na ya so maka ọdịmma gị kachasị mma.
Maka ndị nọ na mmekọrịta onwe gị ebe ị chere na ọdịghị ihe dị mma maka gị nakwa na ikekwe ọgwụgwụ na-abịa, ike nke okwute a nwere ike inyere gị aka ikpebi ihe ị ga - eme.
Brucite, onye si Pakistan
Anyị na-eme omenala emere ọla edo dị ka mgbanaka, olu, ọla ntị, mgbaaka na pendant.
Mbupu n'efu maka iwu ọ bụla opekata mpe US $ 100.00 n'ụlọ ahịa anyị